ပြောင်း ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ (XPD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ပွောငျး ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ (XPD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ (XPD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XPD – ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ
ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: . ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ပယ်လေဒီယမ်အောင်စ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0153ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ယူရိုEUR€0.0129ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0117ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0139ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.139ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0964ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.338ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0569ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0203ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0213ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.345ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.119ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.081ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.15ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.56ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.021ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.023ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.474ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.106ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.62ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩18.18ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.89ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.12ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.424
ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ BitcoinBTC0.000001 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ EthereumETH0.00004 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ LitecoinLTC0.000263 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ DigitalCashDASH0.000175 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ MoneroXMR0.000174 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ NxtNXT1.27 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ Ethereum ClassicETC0.00215 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ DogecoinDOGE4.29 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ZCashZEC0.000176 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ BitsharesBTS0.589 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ DigiByteDGB0.58 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ RippleXRP0.0512 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ BitcoinDarkBTCD0.00054 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ PeerCoinPPC0.053 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ CraigsCoinCRAIG7.13 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ BitstakeXBS0.668 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ PayCoinXPY0.273 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ ProsperCoinPRC1.96 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ YbCoinYBC0.000008 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ DarkKushDANK5.02 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ GiveCoinGIVE33.89 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ KoboCoinKOBO3.46 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ DarkTokenDT0.0141 ပယ်လေဒီယမ်အောင်စXPD သို့ CETUS CoinCETI45.18
2101464 CORE to INR2020-08-05 07:45:11
4900 PNC to USD2020-08-05 07:42:24
300 EUR to NOK2020-08-05 07:41:07
1000 TMT to USD2020-08-05 07:38:01
1500 GSX to PKR2020-08-05 07:37:50
1 GSX to PKR2020-08-05 07:37:41
1000 GSX to PKR2020-08-05 07:37:11
10 LC to INR2020-08-05 07:36:59
2 GSX to PKR2020-08-05 07:36:59
60 UCN to INR2020-08-05 07:30:49
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 07:45:02 +0000.